Marka ay timaado in Android gurmad, aad waxba ka malaynayso ilaa Musiiba ah. Iyagoo u malaynaya inay telefoonka aad Android la xado ama la jejebiyey, oo qaadataa dhammaan macluumaadka ku yaal? Ama waxaad hoos u telefoonka aad Android ee balli ah oo ay leeyihiin in ay sameeyaan dib warshad si caadi ah dib u tagaan? Xaaladahan, waxaad u leedahay in khasaare xogta weyn haddii aad leedahay raad raac ah ee telefoonka aad Android. Backing telefoonka aad Android waa wax soo jiidasho leh oo muhiim ah. Ha sugin ilaa ay goori goor tahay inay bilaabaan ka fekerka telefoonka taageerto kor. Just haatan bilaabaan.
On my article ee la soo dhaafay, waxaan ku talinaynaa ugu sareysa 5 gurmad Android software . Halkan, waxaan doonayaa inaan idiin sheego ugu fiican 5 barnaamijyadooda gurmad Android inay gurmad Android barnaamijyadooda, music, xiriirada, SMS, jadwalka iyo in ka badan.
App kaabta & Soo Celinta Kala duwaan qalab 4.3 / 5 Free
Kaabta Titanium Android 1.5 iyo ilaa 4.6 / 5 Free
Helium Android 4.0 iyo ilaa 4.3 / 5 Free
Kaabta Super Varie aallada 4.4 / 5 Free
My Pro kaabta Varie aallada 4.3 / 5 $38.67
Sida ay magaceeda soo jeedisay, App kaabta & Soo Celinta loo abuuray in ay barnaamijyadooda Android gurmad. Waxaa aad u ogolaanaya in ay barnaamijyadooda Android gurmad in kaarka SD, iyo soo celin marka aad u baahan.
Ka sokow app gurmad iyo soo celiyo, waxay kaloo ka caawisaa in ay guraan barnaamijyadooda magac, xajmiga iyo taariikhda loo xirxiro, barnaamijyadooda raadinta suuqa Google, iyo diri barnaamijyadooda via Email.
2. Titanium xidid ★ ee kaabta
Xididka ★ ee kaabta Titanium waa app ugu fiican gurmad u Android, kuu gurmad oo dhan barnaamijyadooda ilaaliyo, barnaamijyadooda iyo nidaamka xogta dibadda si ay kaarka SD ee telefoonka aad Android ah, oo loo soo celiyo waqti kasta.
Its version pro - kaabta Titanium PRO xidid ★ Key dheeraad ah oo xaq ku siinayaa inay macluumaadka gurmad on Android. Iyadoo version pro, waxaad samayn kartaa fariimaha qoraalka ah gurmad, MMS, ugu baaqaysaa abuse, Bookmarks, Wi-Fi AP qaab .xml. Marka ay taageerto kor u barnaamijyadooda, aad xitaa uma baahna in ay xirto app kasta. Si kastaba ha ahaatee, hal baan idin ​​waa in si cad ay tahay in labada qeybood oo u baahan telefoonka aad Android habaysan.
Iyadoo Helium, awoodo barnaamijyadooda Android gurmad iyo xogta si ay kaarka SD, PC ama daruur kaydinta aad. Waxa aanu u baahan telefoonka aad Android in la wada rujiyo. Sidaa darteed, haddii aad rabto in aad gurmad Android aan soo afjarno, Helium waa doorasho wanaagsan. Si aad u isticmaasho Helium, waxaad u baahan tahay rakibi Desktop Helium ah. Waxay leedahay lacag la'aan ah version - Helium - App nidaameed oo kaabta, iyo version bixisay - Helium (Premium).
Iyadoo Helium - App nidaameed oo kaabta, aad barnaamijyadooda Android gurmad iyo xogta si ay kaarka SD iyo PC, iyo soo celin karaa markaad u baahan tahay.
Iyadoo Helium (Premium), waxaad samayn kartaa waxyaabo badan oo. Chine gurmad ka Android inay DropBox, Box iyo Google Drive Waxaad karo, sameyneysaa jadwalka app gurmad oo u hagaagsan u dhexeeya phone Android.
4. Super kaabta: SMS & Xiriirada
Super kaabta: SMS & Xiriirada waxaa loo arkaa deg deg ah gurmad xogta app for Android. Waxaa aad u saamaxaaya in ay xiriir gurmad, SMS, abuse wac, Bookmarks iyo kalandar si aad kaarka SD Android iyo Gmail. Ka sokow, waxa aad ku xoojiya sidii ay app Android gurmad aan xididka.
Marka aad lumiso xogta ama sameeyo dib warshad, waxaad soo celin karo xiriirada, SMS, abuse wac, jadwalka iyo Bookmarks ka card SD si fudud. Si kastaba ha ahaatee, si loo soo celiyo data app iyo app, waxaad u baahan tahay rujin telefoonka aad Android.
5. Pro kaabta
My Pro kaabta sidoo kale waa app Android si sahlan loo isticmaalo. Waxay kaa caawinaysaa inaad sawiro gurmad, music iyo playlists, barnaamijyadooda, xiriirada, videos, wac log, SMS, MMS, jadwalka taariikhda, Settings nidaamka, Bookmarks browser, Shabaqa guriga, digniinta, dictionary, iwm ayaa files gurmad waa la badbaadin doonaa kaadhka SD ah ama daruurtii. Sidaas darteed, Haddii aad rabto in aad Android gurmad online, My Pro kaabta waa fiican doorasho.
3 Siyaabaha kaabta iyo Soo Celinta Android Phone
Abaabulaan Android Apps in hal meel ah
Xiriirada Transfer iyo ka Android Phone
Android ka Bedelka SMS si PC
Import VCF File in Android
Top 8 Manager Contact Android
Best Android App rakibayo Waxaad u
> Resource > Android > Best 5 Android kaabta Apps